SAWIR: Miyuu Eden Hazard Naaxay (Cayilay)? Wargeyska AS Oo Wer-Wer Ku Abuuray Jamaahiirta Real Madrid & Sawir Uu Adeegsaday Oo Muran Dhaliyay? - Gool24.Net
SAWIR: Miyuu Eden Hazard Naaxay (Cayilay)? Wargeyska AS Oo Wer-Wer Ku Abuuray Jamaahiirta Real Madrid & Sawir Uu Adeegsaday Oo Muran Dhaliyay?
Wargeyska fadhigiisu yahay magaalada Madrid ee AS oo aad ugu dhaw kooxda Real Madrid ayaa adeegsaday sawir muran badan dhaliyay kaas oo wer wer ku abuuray jamaahiirta Los Blancos kuna saabsan saxeexa cusub ee Eden Hazard.
Kaddib markii uu dhawaan kaga soo biiray dhinaca Chelsea, Hazard ayaa inta kale ee xiddigaha kooxdiisa cusub kula biiray isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub iyaga oo maanta u duulaya dalka Canada halkaas oo ay tababar ku qaadan doonaan.
Madrid ayaa ku dhawaad 100 Milyan kula saxeexatay 28 jirkan oo ay ka saxeexatay heshiis shan sano ah waxaana la filayaa inuu ugu yaraan weerarka kooxdiisa kusoo kordhin doono hoggaamintii ay waayeen xilli ciyaareedkii hore.
Si kastaba, Wargeyska AS ayaa maanta boggooda hore usoo adeegsaday sawirka Hazard iyo xiddigo kale oo Madrid ah waxaana uu ugu horreyn sawirku u muuqday markii uu Hazard tijaabada caafimaadka u marayay.
Sawirkaas ayaan ahayn midka rasmiga ah ee Hazard balse waxa xaqiiqo noqotay oo mar dambe cadaatay in sawirku uu yahay midka Karim Benzema oo kurka Hazard lagu dul saaray farshaxan (Photosho).
Haddaba, Maxay tahay sababta uu wargeyskani sidaas oo dhan u samaynayo maxaase ku qasbay inuu jidhka Benzema dul dhigo kurka Hazard? Sababta ayaa lagu sifeeyay in Hazard uu noqday mid naaxay oo miisaan ku kordhay.
Hazard ayaa lagu eedaynayaa inuu tababarka kooxdiisa cusub kusoo laabtay isaga oo cayilan oo baruur jidhkiisa fuushay waana arrin wer wer ku noqonaya jamaahiirta Los Blancos ee rajada weyn ka qaba.
Halkan Hoose Kaga Boggo Caddaymaha Sawirkan